Hagaha Hordhaca ee Suuqgeynta Fasaxa | Martech Zone
Hagaha Hagaha Suuqgeynta Fasaxa
Isniin, November 25, 2019 Isniin, November 25, 2019 Yael Zlatin
Xilliga fasaxu si rasmi ah ayuu halkan u joogaa, waana la qaabeeyaa si uu u noqdo mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee rikoodhka ku jira. Iyadoo eMarketer saadaalineyso kharashka dukaamada elektaroonigga ah ka badan $ 142 bilyan xilligan, waxaa jira waxyaabo badan oo wanaagsan oo lagu wareego, xitaa tafaariiqleyda yaryar. Trick in lagu sii jiro tartanka waa in laga helo caqli ku saabsan diyaarinta.
Fikrad ahaan waxaad durba bilawday howshan, adoo adeegsanaya bilihii lasoo dhaafay qorshaynta ololahaaga iyo dhisida sumadaha iyo liisaska dhagaystayaasha. Laakiin kuwa wali diirinaya matoorradooda, niyadda geli: ma habsaamto inaad saameyn sameyso. Halkan waxaa ah afar tallaabo oo la taaban karo oo kaa caawin doona inaad dhisto oo aad fuliso istiraatiijiyad fasax oo guuleysta.
Talaabada 1: Tayadoow Jadwalkaaga
In kasta oo 'ciidaha' ay farsamo ahaan u dhexeeyaan Thanksgiving ilaa Kirismaska, xilliga dukaamaysiga fasaxa sidaas laguma qeexin. Iyada oo ku saleysan habdhaqanka wax iibsiga ee 2018, Google ayaa muujinaya taas 45% macaamiisha ayaa soo sheegay inay iibsadeen hadiyad fasax ah Nofeembar 13-keedii, iyo inbadan waxay dhammeeyeen dukaamaysigooda fasaxa dabayaaqada Noofambar.
Jadwalka waqtiga oo caqli gal ah, imaatinka dambe ee xafladda macnaheedu maahan inaad ka maqnaato koorsada weyn. U adeegso bartamaha Nofembar inaad diirada saarto sumadaynta iyo raadinta - tani waxay kaa caawin doontaa inaad macaamiisha la xiriirto goor hore tixgelinta iyo wajiga iibsiga.
Marka ay soo dhawaato Thanksgiving iyo Cyber ​​Week, bilaw inaad kala soo baxdo heshiisyo isla markaana aad ku ballaadhiso xayeysiisyada kanaallada oo dhan, adiga oo macaamiisha ka abuuraya farxad Ka dib, kor u qaad raadintaada iyo miisaaniyadeynta miisaaniyadeed isla Isniinta kahor. Guud ahaan, kordhinta miisaaniyada seddex ilaa shan laab inta lagu jiro xilliga fasaxa ayaa ku siin doonta fursadda ugu fiican ee lagu soo qaban karo kuwa beddelaadda dheeriga ah ee suuqa tartanka.
Ugu dambeyntiina, Q1 wuxuu caddeeyay inuu yahay mid ka mid ah bilaha ugu adag ganacsiga elektaroonigga ah, isagoo si xawli ah ugu socda sannadka cusub. Ka dhig miisaaniyaddaada mid xoogan illaa ugu yaraan Janaayo 15-keeda si aad uga faa'iideysato isbeddelladan sii kordheysa ee dukaamaysiga fasaxa kadib.
Tallaabada 2: Mudnaan siinta shaqsi ahaaneed
Inta badan tafaariiqleyda yar yar waligood rajo kama qabaan inay iswaafajiyaan miisaaniyadda xayeysiiska ee kooxaha waaweyn sida Amazon iyo Walmart. Si aad u sii ahaato tartan, suuq caqli gal ah - ma ahan mid ka sii adag - adoo ku dhajinaya shakhsiyaddaada.
Markaad ururinaysid caadadaada iyo u ekaantaada dhagaystayaasha, waxaad diirada saartaa nolosha intaad nooshahay. Kumaa ka mid ah liistooyinkaaga oo lacagta ugu badan kula qaatay, iyo yaa ku dukaamaysta inta badan? Kumaa ahaa kuwii wax iibsaday ee ugu dambeeyay? Kuwani waa bartilmaameedyada ugu muhiimsan ee kor u qaadista iyo iibinta iskutallaabta, iyada oo loo leexinayo kharashka dheeraadka ah ee xayeysiinta, soo jeedinta waxyaabaha la xiriira, bixinta isku-darka dhimista ama abaalmarinta hadiyad marka la bixinayo.
Intaad kobcineyso dadka wax iibsanaya inta ay nool yihiin, ha ilaawin inaad raadiso oo aad beegsato martida cusub. Criteo ayaa soo warisay in booqdayaasha websaydhada ee dib loogu habeeyay xayeysiisyada bandhiggu ay yihiin 70% ayuu u badan yahay si loogu badalo. Duubista nashaadaadka booqdayaashan iyo dhisida liisaska loo qoondeeyay xilliyada fasaxa oo dhan ayaa fure u ah dib u soo celinta iyo sugidda beddelaadda.
Tallaabada 3: Farsamaynta Xayeysiinta Xariifka ah
Dhiirrigelinta ayaa sida ugu fiican u shaqeyn doonta haddii ay ku habboon yihiin baahiyaha iyo dookha dhagaystayaashaada gaarka ah. Dib u eeg isbeddelladaadii fasaxa ee la soo dhaafay oo baro waxa shaqeynaya, ka dibna ku maalgeli dallacaadahaas.
Ma hubo waxa sida ugu fiican u shaqeynaya? eMarketer ayaa sheegay in dalabyada ugu badan ee xayeysiinta ah waa qiimo dhimis by 95% aad u tiro badan. Maraakiibta bilaashka ah sidoo kale waa lama huraan markay suurtagal tahay, iyo hadiyadaha bilaashka ah iyo dhibcaha daacadnimada ayaa sidoo kale ka codsanaya macaamiisha. Waxay kuxirantahay badeecadaada iyo miisaaniyadaada, waxaad tixgelin kartaa taariikhaha bixinta la hubo, lambarrada kuuboon, xirmooyinka hadiyadaha ee horay loo duubay iyo farriimaha gaarka ah.
Talaabada 4: Hel Websaydhkaaga taraafikada-Diyaar
Runtii websaydhkaagu diyaar ma u yahay taraafikada fasaxa? Isbedelo yar oo yar ayaa isbedel weyn sameyn kara marka ay timaado sameynta iibka ugu dambeeya.
Ku billow inaad hubiso in websaydhkaagu wax ka qabto su'aalaha aasaasiga ah iyo shakiga soo baxa inta lagu jiro khibradda wax iibsiga. Intee ayey le'eg tahay caqabadda soo gelitaanka? Sidee u fududahay soo celinta? Sideen u isticmaalaa sheyga? Tallaabooyinka fudud sida kala-soocidda alaabooyinka qiimaha, oo ay ku jiraan dib-u-eegista macaamiisha iyo tilmaamidda sahlanaanta soo noqoshada ayaa gacan ka geysata dhisidda kalsoonida macaamiisha.
Marka xigta, ka dhigo websaydhkaaga mid sahlan oo lagu dhex maro mobilka. Cilmi baarista Google waxay muujineysaa taas 73% macaamiisha ayaa ka wareegi doona goob mobilada si liidata loo qaabeeyey una wareegi doonaan goob mobiil kale ah taasi waxay ka dhigeysaa wax iibsiga mid fudud. Khatar ha u galin inaad lumiso beddelaadyadan adoo iska indha tiraya joogitaankaaga moobiilka.
Ugu dambeyntii, hagaaji qaybta ugu muhiimsan ee dukaankaaga ganacsiga: ka bixitaanka. Waqti sii si aad u fahamto waxa ku kalifaya dukaanleyda inay ka tagaan gawaaridooda oo ay saxaan arrimahaas. Ma khidmadaha maraakiibta ama qiimo kale oo lama filaan ah? Soo iibsigaadu ma dhib badan yahay oo waqti buu ku qaadanayaa? Dukaameysanayaashu ma inay akoon abuuraan? Fududee hawsha sida ugu macquulsan si aad naftaada u siiso fursadda ugu fiican ee dhameystirka iibka.
Kuwani waa dhowr tallaabo oo muhiim ah in la qaado marka loo diyaargaroobayo xilliga ciida - laakiin si kasta oo aad u daahdid bilowga, tallaabo kasta oo aad u qaado dhanka is-hagaajinta iyo shaqsiyeynta ayaa kaa caawin doonta inaad isbeddel ku sameyso khadkaaga hoose. Xitaa ka sii wanaagsan, shaqada aad hadda gelisay, laga soo bilaabo rajada illaa isbeddelada goobta illaa horumarinta sumcadda, waxay haddaba kuu diyaarinayaan suuqgeyn wax ku ool ah illaa Sannadka Cusub iyo wixii ka dambeeya.
Tags: wiigga internetkaecommercedukaameysiga ciidahaHagaajintawalmart
Yael waa Agaasimaha E-commerce ee Adtaxi. Waxay haysataa sanado badan oo ay muujisay guul ay ka gaadhay dhisida fangasyo guul leh waana hogaamiye feker horumarsan iyo lataliye dhanka tababbarka, hogaaminta iyo dhiirigelinta kooxaha gudaha iyo kuwa isdaba jooga ah.
Baraha Bulshada: 3 Talooyin Oo Si Wanaagsan Ugu Xidhan Macaamiishaada
Sida Loogu Wareejiyo Boggaaga WordPress-ka ee loo beddelo Domain cusub